कैलाश विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २५ चैत २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण कैलाश विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २५ चैत २०७५)
on: April 08, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
कैलाश विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २५ चैत २०७५)
गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको कैलाश विकास बैंकको चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा रू. २७ करोड ४६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५२ करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ९३ करोड ६८ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले ८८ ओटा शाखा कार्यालय र ३१ ओटा एटीएमहरूबाट बैंकिङ सेवा सुविधा दिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रूपमा स्थापित गर्न शाखा नपुगेको स्थानमा र ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने कम्पनीको आगामी योजना रहेको छ । व्यावसायिक लगानीलाई विविधीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने कृषि ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना पनि छ ।
कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा रू. २६ अर्ब ७२ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. २३ अर्ब ५४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप ३९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ३४ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको लगानी रू. ९२ करोड ७१ लाख छ ।
रू. ६१ करोड १३ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी भएको हो । कम्पनीको कर्मचारी खर्च ५३ प्रतिशत बढेर रू. १४ करोड ७३ लाख पुगेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५ करोड ४७ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति रू. २२ करोड ८३ लाख पुगेको छ भने अन्य सम्पत्ति ४९ प्रतिशत बढेर रू. ३० करोड ४० लाख पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा रू. २५ लाख ५२ हजार खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत, पूँजीकोष लागत ८ दशमलव ६८ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १४ दशमलव ९७ प्रतिशत छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ८५, मूल्य आम्दानी अनुपात ९ दशमलव ७० गुणा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य रू. १ हजार २ सय ८९ दशमलव ४१, तरलता अनुपात २४ दशमलव ४५ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३७ दशमलव १७ छ । आइतवारको शेयरमूल्य रू. २ सय १० कायम भएको छ ।
अर्निङ पावर रेशियो : ०.००८ गुणा
अर्निङ यिल्ड रेशियो : १०.४० प्रतिशत
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा ५ हजार कित्ता शेयर खरीद गर्ने र ४ हजार ९ सय १२ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग छ ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा इन्भर्टेड ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिशमा रिभर्श हुने संकेत देखाउँछ । विश्वसनीयता भने सामान्य छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ५२ दशमलव ५१ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव ४९ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा माथि छ । आइतवार शेयरमूल्य रू. २ सय १० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. २ सय १२ मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. २ सय ८ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
कन्काई पछि प्राइम बैंक ललितपुर फाइनान्स र कैलाश विकासतर्फ लाग्यो
कैलाश विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ११ वैशाख २०७६)
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १५ जेठ २०७६)